Izindaba - Kukuziphi izimo lapho amakhithi osizo lokuqala esetshenziswa kakhulu?
Izinhlekelele nezingozi emphakathini wanamuhla kwenzeka kakhulu ezakhiweni zamahhovisi, ezindlini zokuhlala, ezinxanxatheleni zezitolo ezinkulu, kwezokuthutha nasekukhiqizeni amabhizinisi. Okokusebenza okuphuthumayo kanye nezinhlelo zalezi zindawo ezinabantu abaningi zidinga ukuhlonyiswa ngokucophelela nokwakhiwa. Ngaphandle, Imvelo esemotweni nayo idinga izinyathelo zemishini ehambisanayo.
Ngakho-ke umbuzo uwukuthi, uyazi yini ukuthi yiziphi izigcawu ezivame ukusetshenziswa kuma-kits eziphuthumayo namakhithi osizo lokuqala?
Ehhovisi, ungabona amakhithi ezimo eziphuthumayo noma amakhithi ezimo eziphuthumayo okulula ukufinyelela kuzo. Lapho usuhlangabezane nesimo esiphuthumayo, ungaphuma ngokushesha ngaphansi kokuphepha kwempahla ephuthumayo, noma usebenzise izinto zokuqala zosizo ngaphakathi. Kulabo abadinga usizo Ngesikhathi esifanayo, kwanikezwa ukunakekelwa kwangaphambi kwesibhedlela ngesikhathi esifanele. Kumashabhu wokukhiqiza, uma kwenzeka ingozi yezokuphepha, ungasebenzisa amathuluzi wakamuva kanye nezindlela ezifanele zokufunda ekubunjweni nasekuqeqesheni okujwayelekile, uthathe izinyathelo eziphuthumayo, ulawule ukuqhubeka kwesimo, futhi uqinisekise ukuthi impilo yakho nokuphepha kwakho emsebenzini ukuphepha kokukhiqizwa kwebhizinisi akuthinteki. amathonya.
2 Izinhlangano zikahulumeni:
Akunandaba ukuthi yiliphi izinga likahulumeni, ngokungangabazeki lithwala umthwalo wokuvikela ukuphepha kwabantu, ukuhlinzeka ngemvelo yabantu ukuba baphile futhi basebenze ngokuthula nangokwaneliseka, futhi basebenzele ukuphepha komphakathi. Noma ngabe uzamcolo wango-1998, ukuzamazama komhlaba kwango-2008, noma izingozi ezahlukahlukene zomlilo, izingozi zomgwaqo, nezehlakalo zobudlova ezinobudlova, ohulumeni babantu kuwo wonke amazinga bakhombise ukubulawa okunamandla kakhulu.
Ukuvumelana phakathi kodokotela neziguli kanye nekhampasi ephephile yizinto ezibalulekile nobunzima bomphakathi wamanje. Izigameko zezindaba ezahlukahlukene njengezingozi zezokwelapha, izingxabano zabadokotela neziguli, udlame lwasekolishi, ukuphepha kwamabhasi ezikole, njll. Izibhedlela yizindawo ezibaluleke kakhulu ukuhlenga abafayo nabalimele. Lapho izingozi zokuphepha kanye nezigameko eziningi zenzeka, umthelela omubi uyoba mkhulu kakhulu.
Isikole simayelana nokuphepha kwesizukulwane sethu esilandelayo. Yize singafuni ukuvikela izingane zethu njengomengameli wesikhathi esizayo, singaqinisekisa impilo yezingane nengqondo ngemikhiqizo yethu yezokuphepha, futhi imfundo yezokuphepha ingahlakulela abantu abanolwazi oluphakeme ngokuphepha. Abalandelayo, ngabazali besikhathi esizayo kanye nezakhamizi zesikhathi esizayo, ezihlobene nekusasa lezwe lonke.
Ngobuningi babantu abasemadolobheni kanye nezimo eziphuthumayo, ngokuya ngecebo likahulumeni lokwakhiwa kwegridi yezimo eziphuthumayo nomsebenzi wokwakha umphakathi ophephile, kuyadingeka ukuthi abaphenduli besiza bathole izindlela zokuphatha ezifanele, ukuhlenga, ukukhipha abantu nezindlela zokuhlaba umkhosi.
Empilweni yethu yasekhaya, yonke imindeni iyiseli lomphakathi, futhi ukuphepha kwamalungu omndeni, ikakhulukazi ukuphepha kwezingane, kugxila kithi.
Ngokuthuthuka okusheshayo kwezokuthutha, izindlela zokuhamba zabantu ziyasebenza futhi zilula. Ngasikhathi sinye, izingozi ezahlukahlukene zomgwaqo zenzeka ngezikhathi ezithile. Ngokwezibalo ezingaphelele, kunabantu abaningi abafayo emhlabeni. Kuyingozi yomgwaqo. Akujwayelekile ukuthi zonke izingozi zomgwaqo, kufaka phakathi imoto ewela emanzini, ukushayisana ngesivinini esiphezulu, ukushisa okuzenzekelayo kwemoto, ukushayisana kwe-serial, ukwehluleka kwamabhuleki, ukugumbuqela, ukuminyana kwendawo enkulu, njll., Ukudala ukulahleka kwempilo futhi impahla nokushayela amahloni. Umshwalense wethrafikhi unganciphisa ukulahleka kwempahla kubantu, nesando esincane sokuphepha, isicisha mlilo, ikhithi yosizo lokuqala, intambo yokudonsa, intambo yebhethri, impompo yomoya nezinye izinto eziphuthumayo ezilungiselelwe emotweni kungaqinisekisa ukuphepha kwempilo yazo ngesikhathi esibucayi sokushayela usizi. Bhekana kalula lapho imoto yakho iphuka.
I-Terminal ye-Supermarket Yezentengiso:
Izakhiwo zomphakathi zaseChina zakhiwe ngezidingo zokuvikelwa komlilo kanye nokuvikela umoya womphakathi. Ngakho-ke, imishini yokulwa nomlilo igxilile ezinhliziyweni zabantu njengekhodi eliyimpoqo. Kodwa-ke, sisengabona ukuthi izehlakalo zokuphepha ezindaweni zomphakathi ezinabantu abaningi, njengezitolo ezinkulu, izitolo ezinkulu, amahhotela, amahholo okubukisa umphakathi, namatheminali neziteshi, nazo zenzeka ngezikhathi ezithile. Izikhungo eziphuthumayo kanye nemishini efana namabhokisi okuqondisa izimo eziphuthumayo, imishini yosizo lokuqala ye-AED, namakhithi osizo lokuqala ezempilo yomphakathi ezindaweni zomphakathi kuvele ngokuthula kwezinye izindawo zokuthenga ezisezingeni eliphakeme, ezikhumulweni zezindiza, ezindleleni ezihamba ngaphansi komhlaba nasezikhangisweni zabavakashi.